Rakaab laga dejiyey Diyaarad laga shakiyey oo ku sii jeeday Baydhaba & Baaritaan culus.. | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Rakaab laga dejiyey Diyaarad laga shakiyey oo ku sii jeeday Baydhaba & Baaritaan culus..
Diyaarad ku sii jeeday magaalada magaalada Baydhaba oo ka duuli rabtay Garoonka diyaaradaha Aaden Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa la hakiyey xillig ay duuli lahayd, waxaana laga dejiyay rakaabkii saarnaa kadib markii uu shaki dhinaca Amniga ah soo galay.
Arrintan ayaa ka danbeysay markii uu diyaaradda ka degay qof shakigan abuuray, taasoo dhalisay in diyaaradda la celiyo, kadibna laga dejiyo dadkii iyo xamuulkii saarnaa oo dhan oo baaritaan hor leh oo culus lagu sameeyay, iyadoo kadibna duulimaadkeedii loo fasaxay.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Somalia Yuusuf Garaad Cumar oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradaasi oo arrintan qabsatay ayaa qoraal kooban ku faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen:
Maanta aniga oo ka duuli raba garoonka dayaaradaha ee Muqdisho ayaa shaki ku abuurmay rakaabka aan dayaaradda wada raaci lahayn, muranna ka dhex dhalisay. Markii aan dayaaradda gudaheeda fariisannay ayaa qof ka mid ah rakaabku uu goostay in uu dayaaradda ka haro. Waxay taasi kalliftay in nala daahiyo, mas’uuliyiinta amniga ee Garoonka Aden Cabdulle ay goobaan, dejiyaanna qofkii haray shandaddiisa. Intaa laguma joojin ee waxaa la dejiyay dhammaan shandadaha dayaaradda hore loogu raray iyo dhammaan inteennii rakaabka ahayd iyo waliba shaqaalaha dayaaradda Waxaa la keenay laba eey oo kala nooc ah, kala dambeeyana oo midba mar uu baaray xamuulka oo dhan, boorsooyinka gacanta iyo gudaha dayaaradda. Markaa ka dib ayaan fasax u helnay in aan dayaaradda gudaheeda galno oo qof waliba uu kursigiisa dib ugu laabto. Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan madaxda iyo hawlwadeennada amniga ee gegida dayaaradaha feejignaanta iyo go’aan qaadashada iyo waliba sida ay noogu fasireen iyaga oo cudur daar bixinaya in la hakiyay dayaaradda mar labaadna la baaray.
Previous articleMaxay ka wadahadleen Safiirka Kenya ee Somalia iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda?
Next articleNin Ingiriis ah oo Maxkamad loogu soo taagay Muqdisho, khalkhal gelinta Amniga… [Daawo]